Ogaden News Agency (ONA) – ZENAWI OO GABBAD AH iyo BANAANBAXA NORWEY
ZENAWI OO GABBAD AH iyo BANAANBAXA NORWEY
Jaaliyada Somalida Ogadeniya ee wadanka Norwey oo weheliyaan Jaaliyadaha Scandenevianka ayaa waxa ay banaanbax weyn ku beegeen Shirka Tamarta ee OSLO. Shirkaas oo ay Wadanka Norwey ku casumeen Madaxda Wadamada Afrika oo uu kamid yahay kasoo qeyb galayaasha Kaligii taliye Males Zenawi.
Jaaliyada Somalida Ogadeniya ayaa cabasho u gudbisay ay kaga soo horjeedaan casuumada kaligi taliye Males Zenawi looga fidiyay shirka Norwey. Waxayna cabashadooda ku aadiyeen Dowlada Norwey oo shirkan marti galisay khaastan Ra’isulwasaaraha Wadanka Norwey Jens Stoltenberg oo isagu furi doona shirka maalinimada isniinta. Shirkan ayaa waxa kale oo ka hadli doona Xoghayaha Qaramada Midobay Ban ki Moon. Iyo Waliba Madax badan oo kasocda Midowga Europe iyo wadamada soo koraya oo ay u badnaan doonaan wadamada Afrika. Shirkan ayaa sidoo kale waxa kusoo qulqulaya jaaliyadaha somalida Ogadeniya ee ku nool wadamada Scandenevianka oo lafilayo in si xoogan u horjoogsadaan una muujiyaan dareenkooda ku aadan kaligi taliye Zenawi.
Jaaliyadaha Somalida Ogadeniya ee ku sugan wadamada Ree Galbeedka ayaa hadiyo jeer banaanbaxyo ku qabta shirarka uu kasoo qeyb galo Kaligi taliye Males Zenawi. Ninkan oo ah nin xoog ku qabsaday Wadanka Ethiopia sanadkii 1991 waxa uu xasuuq ballaadhan u geystay shacabka Somalida Ogadeniya. tacadiyadaas oo si caalami ah loogu qiray warbixinaha xuquuql insaanka iyo warbaahinta Caalamka. BBC Newsnight ayaa bishii August lagu soo bandhigay tacadiyada uu geystay isaga oo lacagaha deeqda ah ee uu ka helo wadamada ree galbeedka u adeegsada sidii uu ugu gumaadi lahaa Somalida Ogadeniya iyo Guud ahaanba shucuubta Ethiopia ee kasoo horjeeda taliskiisa TPLF.
Hadaba si ay u muujiyaan tacadiyada uu geysto Zenawi waxa jaaliyadaha Somalida Ogadeniya ay qabtaan banaanbaxyo ay isugu yimadaan boqolaal iyo kumanaan qof goobkasta oo caalamka kamid ah oo Kaligi taliye Zenawi kuso baqoolo. Waxa xasuus mudan Banaanbaxyadi G20 ee Jaaliyadaha Somalida Ogadeniya ku qabteen London, Canada iyo Denmark. Halkaas oo ay ku ceebeeyeen kaligi taliye Males Zanawi.
Wadanka Norwey waxa hada ka hor lagu casuumay raisal wasaaraha Ethiopia kaligi taliye Zenawi, si uu uga hadlo shir lamid ah kan hadda lagu casuumay OSLO. Shirkaas ayaa jaaliyadaha Somliada Ogadeniya ee Wadanka Norwey isa soo hortubeen goobti shirka Waxa ayna gudaha usoo galeen shirka oo ka socday goobtii shirka. Kaligi taliye Zenawi oo isagu aha nin taxadar badan qaba kana cabsi qaba Banaanbaxyaasha ayaa markiiba waxa loola cararay banaanka isaga oo laga saaray iridka Danbe ee Fire Exitka. Waxa uuna dib ugu noqday Addis Ababa.
Hadaba Males Zenawi oo aad uga warqaba cadhada shacabka ogadeniya ee Norwey iyo guud ahaannba somalida Ogadeniya ee haysta dhalashada ree galbeedka iyo dhiiranaaantooda ay goob kasta uu yimado ku ceebeeyaan ayaa waxa uu goostay in imaatinkiisa wadanka Norwey inuu qariyo. islamarkaasna uusan sida madaxda kale ee Afrikaanka uusan ku shaacinin warbaahinta.
Ujeedada Shirka OSLO:
Dowlada Norwey ayaa waxa ay u loleynaysa in wadamada sookoraya loo sameeyo kaabe dhaqaale oo kor loogu qaado tabarta dabka si waxsoosarkooda kor loogu qaado. Shirkan oo u jeedadiisu fiicantahay ayaa balse shucuubta geeska afrika waxa ay muujinayaan in horumar lagaadhsiin karin wadamada geeska afrika illaa la helo sinaan iyo caddaalad.
Hadaba Raisal wasaraha Ethiopia ayaa la filaya inuu shirkaas ka codsado in Ethiopia lagu siiyo dhaqaale ay koronto ugu galiso Wadamada Geeska Afrika sida Djibouti, Kenya, Somalia iyo Sudan. Zenawi ayyaa waxa uu caan ku yahay baryootan innuu lacago uga qaato wadamada ree galbeedka islamarkaasna lacagahaas uu adeegsado sidii uu ugu gumaadi lahaa shucuubta Ethiopia.
Shirkan iyo Banaanbaxa oo warbaahinta caalamku aad uu eegayso waxa aad kala socon doontaan waxi kaso kordha warbixinahayaha soo socda.
maan shaa alaah waxad ku guda jirtaan arin fiican wayaanunu wax xishooda ma aha lakiin inagu waxaynu u badinayaaa dabka halkas kasii wada guulaysta
balanteenu waa guul iyo gobonimo